Edemede Kenneth Evans na Martech Zone |
Edemede site na Ọnye na -bụ Kenneth Evans?
Ọnye na -bụ Kenneth Evans?
Kenneth Evans bụ Ọdịnaya Ahịa Strategist maka Ieslọ ọrụ na-emepe emepe ngwa ngwa, usoro nyocha maka ụlọ ọrụ mmepe ngwa na USA, UK, India, UAE, Australia na gburugburu ụwa. Ọ nọ na-enye aka na ntanetị dị iche iche na ikpo okwu.
Blockchain - Ọdịnihu nke Teknụzụ Ego
Tuesday, April 2, 2019 Tuesday, April 2, 2019 Ọnye na -bụ Kenneth Evans?
A na - ahụ okwu cryptocurrency na blockcheni ebe niile. Enwere ike ịkọwa uche ọha na eze dị otú ahụ site na ihe abụọ: ụgwọ dị elu nke Bitcoin cryptocurrency na mgbagwoju anya nke ịghọta isi ihe nke teknụzụ. Akụkọ banyere mmalite nke ego dijitalụ mbụ na teknụzụ P2P dị n'okpuru ga-enyere anyị aka ịghọta "ọhịa jungles" a. Mgbasawanye agbasawanye enwere nkọwa abụọ nke Blockchain: • Usoro na-aga n'ihu n'usoro nke blocks nwere ozi.
Atụmanya nke ijikọta teknụzụ Blockchain na Intanet nke Ihe
Fraịde, Machị 15, 2019 Fraịde, Machị 15, 2019 Ọnye na -bụ Kenneth Evans?
Teknụzụ dị n'azụ bitcoin na-enye ohere ka azụmahịa rụọ ọrụ nke ọma ma nwee ntụkwasị obi, na-enweghị mkpa maka onye nnọchi anya ya. Teknụzụ ndị a ahapụla ịbụ ndị a na-eleghara anya ka ọ bụrụ ihe ọhụrụ nke nnukwu ụlọ akụ. Ndị ọkachamara na-eme atụmatụ na iji teknụzụ blockcheni nwere ike ịpụta ịchekwa nde dollar 20,000 maka mpaghara ahụ ka ọ na-erule 2022. somefọdụ na-aga n'ihu ma na-anwa anwa iji atụpụta ihe a na nke igwe ọkụ.